I-Indiya ukujoyina i-China ekuthinteleni zonke ii-cryptocurrencies zabucala
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » I-Indiya ukujoyina i-China ekuthinteleni zonke ii-cryptocurrencies zabucala
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • Utyalo mali • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
I-Indiya ukujoyina i-China ekuthinteleni ii-cryptocurrencies zabucala
Ukuvalwa kwaseIndiya kwi-cryptocurrency kwatshitshiswa ngo-Epreli ka-2020, okukhokelela kwimakethi ekhulayo ye-cryptocurrency.
Umthetho oyilwayo omtsha oza kudala isakhelo sokuseka imali esemthethweni yedijithali kwaye 'uthintele zonke iimali zabucala zaseIndiya' zongezwe kwi-ajenda ezayo yepalamente yaseIndiya.
Isicwangciso sokuvala zonke ii-cryptocurrencies zabucala seza kwiintsuku nje emva koko Inkulumbuso yaseIndiya uNarendra Modi Izinto eziphikisanayo ezifana ne-bitcoin zinokuphelela 'kwizandla ezingalunganga kwaye' bonakalise ulutsha lwethu.
Isindululo esitsha sibhengezwe namhlanje yiLok Sabha, ilungu le Indiya indlu yabameli. Iza kuba kwi-ajenda yendlu yowiso-mthetho xa ibambe indibano yasebusika ngomhla wamashumi amabini anesithoba kweyeNkanga.
Indiya Ukuvalwa komsebenzi wangaphambili kwi-cryptocurrency kwatshitshiswa ngo-Epreli ka-2020, okukhokelela kwimakethi ekhulayo ye-cryptocurrency. Nangona kungekho datha esemthethweni ekhoyo, uqikelelo loshishino olukhankanywe yiReuters lubeke inani labatyali-mali be-crypto eIndiya phakathi kwe-15 kunye ne-20 yezigidi zabantu, kunye nokubamba okuxabisa ukuya kwi-400 yezigidigidi zeerandi (i-5.4 yeebhiliyoni zeedola).
Urhulumente ophakathi weNew Delhi akakhange abe nomdla kangako. Kwiveki ephelile, PM Modi yathi "kubalulekile ukuba zonke izizwe zedemokhrasi zisebenze kunye" kwii-cryptocurrencies ezifana ne-bitcoin, kwaye "uqinisekise ukuba ayipheli ezandleni ezingalunganga, ezinokusonakalisa ulutsha lwethu."
Ibhanki esembindini yaseIndiya ibonise "iinkxalabo ezinzulu" malunga ne-cryptocurrencies yabucala efana ne-bitcoin okanye i-ethereum, kwaye yathi ngoJuni yayisebenza ngemali yayo yedijithali, eya kuqaliswa ekupheleni konyaka.
I-China ivalwe ngokufanelekileyo i-bitcoin ngoSeptemba, ivala yonke imisebenzi enxulumene ne-crypto-related ekhaya kunye nokuthintela ukutshintshiselana kwamanye amazwe ukwenza ishishini kunye nabatyalo-mali belizwe.
Ngeli xesha, ilizwe laseMbindi Melika lase-El Salvador libhengeze ithenda yezomthetho ye-bitcoin ecaleni kwedola yaseMelika, kwaye yaseka izibonelelo zemigodi ye-crypto exhaswa ngamandla avela kwi-volcano.